Tag: wordpress Otu
Etu esi etinye ndị otu a na-akwụ ụgwọ na WordPress saịtị gị
Otu n'ime ajụjụ ndị m na-aga n'ihu bụ ma m maara na mwekọrịta ezigbo ndị otu maka WordPress. WishList bụ ngwungwu zuru oke nke na-agbanwe saịtị WordPress gị na saịtị ndị na-arụ ọrụ nke ọma. N'ime 40,000 WordPress saịtị na-ama na-agba ọsọ a software, ya mere ọ pụtara, mma ma na-akwado! Atụmatụ WishList ndị otu gụnyere Gụnyere ọkwa ndị otu na - akparaghị ókè - Mepụta ọla ọcha, ọla edo, Platinum ma ọ bụ ọkwa ọ bụla ịchọrọ! Jụọ ndị ọzọ maka ọkwa dị elu nke